Iyiphi iphrinta eshibhile ye-3D ongayithenga | ihadiwe yamahhala
Iyiphi iphrinta eshibhile ye-3D ongayithenga
Ayanda amabhrendi nezinhlobo zamaphrinta e-3D ashibhile, ngakho kuba nzima kakhulu ukukhetha. Okuhle ngalokhu kukhula kwemakethe yokuphrinta enezinhlangothi ezintathu ukuthi unamathuba amaningi ezandleni zakho kanye nezici ezingcono. Ngaphezu kwalokho, yini ukukhetha ezinhlobonhlobo ezinjalo akufanele kube yinkinga ngalolu hlu lwezincomo, lapho ungaya khona uqonde kwamanye amamodeli wephrinta we-3D ashibhile kakhulu ongawathenga.
Iphrinta ye-3D ENTINA Tub... Bona izici Bona ukunikezwa
Xute Impresora 3D con... Bona izici Bona ukunikezwa
VOXELAB Akwila -... Bona izici Bona ukunikezwa
I-ELEGOO Mars 2 Pro... Bona izici Bona ukunikezwa
Okuhle kakhulu	Iphrinta ye-3D ENTINA Tub...
Ikhwalithi yamanani	Xute Impresora 3D con...
Intandokazi yethu	VOXELAB Akwila -...
I-ELEGOO Mars 2 Pro...
1 Amaphrinta angu-6 ashibhile angcono kakhulu e-3D
1.1 I-Anet A8
1.2 Indalo Ender 3
1.3 I-ANYCUBIC Mega Pro (enombhalo we-laser)
1.4 I-Artillery i3 Genius
1.5 I-ANYCUBIC Mega S
1.6 I-ELEGOO Mars 2 (iphrinta ye-resin ye-3D eshibhile)
2 Amapeni angu-5 aphezulu e-3D (Okunye)
2.5 Ukholo 3D
3 Umhlahlandlela wokuthenga
4 Ulwazi oluningi
Amaphrinta angu-6 ashibhile angcono kakhulu e-3D
Lawa mamodeli esiwancomayo aphakathi Amaphrinta we-3D ashibhile angcono kakhulu ongawathenga:
Yize amanye amamodeli esekela iWindows kuphela, kunethuba elihle lokuthi azophinde asekele i-Linux noma i-macOS. Ngakho-ke, uma ufuna ukuqiniseka, bheka ulwazi olwengeziwe ngakho.
I-Anet 3D Printer A8,...
Uma ufuna iphrinta ye-3D eshibhile enenani elikhulu lemali, yilokhu. enye eshibhe kakhulu. Le phrinta ingasebenzisa izinto zokuphrinta ezifana ne-ABS, i-PLA, i-HIP, i-PRTG, i-TPU, izinkuni, inayiloni, i-PC, njll., ngakho-ke izokuvumela ukuthi udale inani elikhulu lezinto zazo zonke izinhlobo. Ngakolunye uhlangothi, inokusekelwa okuhle kweWindows, macOS, neLinux, kanye nokusekela amafayela e-STL, OBJ, kanye ne-GCode.
Ububanzi be umcu 1.75mm Kulokhu, nge-extruder nozzle ububanzi obuyi-0.4 mm. Ingakwazi ukuphrinta izendlalelo ezinobukhulu obuphakathi kuka-0.1 no-0.3mm, kuye ngokulungiswa okukhethayo, kanye nokunemba kokuphrinta okungu-0.12mm. Ngokuqondene nejubane, liyashesha impela, likwazi ukulungisa phakathi kuka-10 mm/s no-120 mm/s. Ngokuqondene nobukhulu noma ivolumu yokuphrinta, ungakha izingcezu ezifika ku-22x22x24 cm.
Indalo Ender 3
Iphrinta ye-3D ye-Creality...
I-Ender 3 V2 i enye yamaphrinta e-3D aziwa kakhulu, enebhodi lomama elizakhele lona ukuze lisebenze kangcono, ukuphrinta okusheshayo, okuzinzile nokuthule. Inomphakathi omkhulu ku-inthanethi wokubuza imibuzo noma ukuxazulula izinkinga, nakho okuhle kakhulu. Iphinde ibe nesibonisi sombala esine-graphical interface yomsebenzisi, amandla okuphrinta kabusha, kanye neplathifomu yengilazi ye-carbon, ukuhambisana kwe-macOS ne-Windows, kanye nesofthiwe ye-Simplify3D ne-Cura.
Iphinde ifakwe a ukunikezwa kwamandla kagesi, enye ehamba phambili esigabeni sayo. Mayelana neyunithi ye-FDM extruder, yakhelwe ukuthi ikwazi ukondla i-filament kalula, ye-1.75mm filaments (PLA, TPU ne-PET-G), ukushuba kongqimba 0.1-0.4 mm, ukunemba okungu-±0.1mm, isivinini esihle, kanye ekwazi ukuphrinta amavolumu afinyelela ku-22x22x25 cm.
I-ANYCUBIC Mega Pro (enombhalo we-laser)
Ambalwa amaphrezentheshini adinga uhlobo lwe-ANYCUBIC, enye ehlonishwa kakhulu ngokuya ngamaphrinta ashibhile e-3D ekhaya. Le phrinta iwuhlobo lwe-FDM, ngemisebenzi yokuqopha nge-laser ngaphezu kokuphrinta kwe-3D. Isimanga esijabulisayo okufanele sengezwe ekhonweni layo lokuphrinta ku-multicolor ngombhobho owodwa (izendlalelo zokumisa isikhashana).
Le phrinta ye-3D enemisebenzi eminingi ingaphrinta imiqulu efinyelela ku-21x21x20.5 cm, kanye nemidwebo engusayizi 22x14 cm. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwe-laser lungabuye lusetshenziselwe ukukala isiteji sokwakha, esisebenza kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, iyiphrinta eqinile, enekhwalithi ephezulu, idizayini eyi-modular yokukhandwa kwayo, kanye nesikrini sokuthinta se-TFT.
I-Artillery i3 Genius
Le enye iphrinta nayo ingelinye lamaphrinta e-3D ashibhile kakhulu ongakhetha kuwo. Inombono ozinzile kakhulu, nesistimu yokuvumelanisa ye-Dual Z. Ukunikezwa kwamandla kwayo nakho kukukhwalithi, ukuze kube nokunikezwa kwamandla okuzinzile futhi okuhlala isikhathi eside. Umbhede oshisayo uyabaleka ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, umlomo wombhobho ungu-0.4mm futhi kuthatha isikhathi esincane kakhulu ukushisa.
Uye uhlelo lokuthola nokululama ngoba uma umucu uphela noma kukhona ukucima kukagesi. Ngale ndlela izoqhubeka nokuphrinta uma isibuyiselwa lapho igcine khona. Ngokuqondene nezinye izibalo, ijubane layo lokuphrinta lifinyelela ku-150 mm/s, ivolumu yokuphrinta efinyelela ku-20x20x25 cm, ukuphrinta buthule, nokulungisa okuhle kungagqanyiswa.
I-ANYCUBIC Mega S
Enye yamaphrinta e-3D ashibhile kakhulu yilena. Uyakwazi uku phrinta ku-TPU, i-PLA, i-HIPS, ukhuni kanye ne-ABS ngobuchwepheshe be-FDM. Ingakha izingcezu ezinevolumu efika ku-21x21x20.5 cm, kube nemiphumela emihle impela, kanye nenkundla enokwelashwa okungaphezulu kwe-microporous ukuthuthukisa ukubambelela. Iphinde ivumele ukuhlanganisa okusheshayo kanye nokuba nokusetha okulula.
Ihambisana ne-Windows, nakuba abashayeli bezinye izinhlelo bangatholakala. Isekela amafomethi afana I-COLLADA, i-G-Code, i-OBJ, i-STL, ne-AMF. Mayelana neminye imininingwane yobuchwepheshe, inokunemba okungu-0.0125 mm ku-eksisi ye-X ne-Y, kanye ne-0.002 mm ye-eksisi engu-Z. Ukulungiswa ngu-0.05-0.3 mm, futhi isivinini sokuphrinta sifika ku-100 mm/ yebo.
I-ELEGOO Mars 2 (iphrinta ye-resin ye-3D eshibhile)
Iphrinta ye-ELEGOO Mars 2...
Ubani owathi amaphrinta we-resin 3D ayabiza? Uma ufuna eyodwa ezishibhile resin 3d iphrinta, nakhu okukodwa kokuhamba phambili. Kuyi-ELEGOO, ene-LCD ye-monochrome engu-6.08 intshi kanye nesixazululo esingu-2K se-UV sokwelapha ukukhanya ukuze kunyatheliswe okunembile, okusheshayo nokwethembeka okukhulu (ifilimu ye-FEP ifakiwe). Ngakolunye uhlangothi, ingakha izingcezu ezifika ku-12.9x8x15 cm, isebenze ngama-resin epulasitiki, futhi ihumushe ukusebenzelana kwayo ezilimini ezifika kweziyi-12 ezihlukene, okuhlanganisa neSpanishi.
Ipeni le-3D, EZIRE... Bona izici Bona ukunikezwa
Ipeni le-3D, ipeni le-3D... Bona izici Bona ukunikezwa
Ipeni lezingane le-3D -... Bona izici Bona ukunikezwa
Ipeni le-3D elinezi-9... Bona izici Bona ukunikezwa
Okuhle kakhulu	Ipeni le-3D, EZIRE...
Ikhwalithi yamanani	Ipeni le-3D, ipeni le-3D...
Intandokazi yethu	Ipeni lezingane le-3D -...
Ipeni le-3D elinezi-9...
Amapeni angu-5 aphezulu e-3D (Okunye)
Uma ufuna umshini okwazi ukuphrinta ngobukhulu obuthathu futhi oshibhile, kungaba owomsebenzi wezandla othize, noma owezingane, kufanele futhi wazi okunye best 3d amapensela (owaziwa nangokuthi amapeni e-3D noma amapeni e-3D) ongayithenga:
Amapeni e-3D aphephile kubantu abadala nasezinganeni, kodwa ukuqapha kubalulekile. Uma emancane kakhulu, gwema ukusebenzisa le mishini yodwa, njengoba ingabangela ukusha uma isetshenziswe kabi.
I-SAYWE 3D Pen,...
I-SAYWE ingelinye lamapensela e-3D ongawathola, okungenzeka ukuthi uwathole khetha phakathi kwemibala engu-24 ye-PLA ne-ABS filaments. Inokulungiswa kwezivinini zokudweba ezingu-6, nezinga lokushisa elilungisekayo ukusuka ku-180 ukuya ku-220ºC ngezinyathelo ezingu-+1ºC, kanye nesikrini se-LCD sokubonisa ulwazi. Ifaka i-adaptha yamandla.
Ipeni Lokuphrinta le-3D...
Kungumkhiqizo ofana nowangaphambilini. Leli elinye ipeni le-3D liphinde lihlanganise isikrini se-LCD ukuze ubone ulwazi lokushisa, oluhambisana ne-PLA ne-ABS filaments, ilungele izingane kanye nabantu abadala, kanye ne-1.75mm filaments, futhi inamandla. Kuze kube manje inembile kunangaphambili, kodwa inomehluko, futhi yilokho kulesi simo kufika ku-8 izilungiselelo zesivinini ziyasekelwa.
Enye ipeni le-3D izingane noma abantu abadala, kokubili okobuciko njengokuhlobisa, izipho, noma abadali abafuna ukudweba nge-3D. Leli penseli lishibhile futhi likwazi ukulawula izinga lokushisa kanye nesivinini esingu-8. Ungasebenzisa i-1.75mm PLA ne-ABS filament, enemibala efika kweyi-12 ongakhetha kuyo. Ngaphezu kwalokho, yakhelwe ukuthuthukisa ezokuphepha.
Okunye okuhlukile kunangaphambili yilesi peni le-3D elinesikrini se-LCD esihlakaniphile, uhlobo lwe-filament engu-1.75 mm. I-PLA, i-ABS ne-PLC, enekhono lokulungisa kufikela kumazinga angu-8 ejubane lokudweba, kanye nokulawula izinga lokushisa, ukwakheka kwe-ergonomic, nosayizi ohlangene.
I-Fede 3D ingenye yezinhlobo ezitholakalayo, enogqinsi ongu-1.75mm PLA kanye ne-ABS filament ngemibala eminingi. 12 filament spools of 3.3 amamitha ngamunye afakiwe, okwenza isamba esingamamitha angama-39.6 yokudweba. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa isikrini se-LCD, amandla e-USB, futhi ifanele izingane kanye nabantu abadala.
para ukukhetha iphrinta ye-3D engcono kakhulu eshibhile Ngokwezidingo zakho, ungakwazi funda umhlahlandlela wethu ukuze ungalenzi iphutha ekuthengeni futhi ugcine ukhungathekile ngemiphumela futhi uzisole ngokufaka leyo mali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Iyiphi iphrinta eshibhile ye-3D ongayithenga
I-Odroid Go: ikhithi yokwakha eyakho ikhonsoli yegeyimu ephathekayo
Ultimate Guide: Ungakhetha Kanjani Iphrinta Ye-3D